University of Essex - Ọmụmụ na England, United Kingdom
University of Essex Nkọwa
tọrọ ntọala : 1964
Students (ihe ruru.) : 15000
Echefukwala atụle University of Essex
Idebanye aha na University of Essex
Site na-amụrụ nupụ isi nke 60s anyị dịkọrọ ndụ n'ala-agbasa research, anyị mgbe nabatara dị na mbụ ma ọ bụ ịtụ egwu ikwu okwu. Anyị na-mgbe na-eche echiche nke ọhụrụ na mma ụzọ eme ihe. Anyị n'ụlọ akwụkwọ na ngalaba sare ndú ụwa-klas nnyocha nke na agbanwe ndụ.
Anyị bụ ndị a n'ụlọ maka nkà na tenacious, Nwere Obi Ike na obi ike, na ndị na-enweghị ndidi n'ihi na mgbanwe. Ịma aka mbono dị anyị DNA. Ị ga-gụrụ nwere ọtụtụ dị iche iche echiche na echiche, dị ka ndị anyị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eche! okwu ihu ọha usoro, nke pụtara na anyị agaghị na-ekwekọrịta n'ihe - ma nke ahụ bụ otú oké echiche bụ na a mụrụ.
Ọ bụ nanị site na-agba ume ka ị na-ajụ ajụjụ siri ike, anyị nwere ike inwere ọgụgụ isi ókè. Na Essex anyị ịgbasapụ ókèala nke ihe ọmụma na ọsụ ụzọ ngwọta na-nsogbu nke zuru ụwa ọnụ nchegbu. Anyị na-enye gị ezi ikike ịkpụzi ihe na-aga gburugburu gị na-ewere ọgụgụ isi ihe ize ndụ nke mere na nakwa dị ka na-amụta 'otú', ị aka 'mere'.
Na Essex anyị na-agba anyị na ụmụ akwụkwọ kwesịrị ịchọsi na-onye ọ bụla bụ hara ma ọ dịghị onye na-elu - na inwe obi ike ma ọ bụghị mpako, amamiihe ma umeala n'obi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe si gị mahadum abụghị naanị ezigbo ogo, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata na eme ka a dị, Essex bụ ebe na-abịa.
chancelo, University of Essex na Civil Liberties campaigner
Essex ewebata gị ndị si n'akụkụ ọ bụla nke ụwa – anyị na-na nke 21 kasị mba mahadum dị na ụwa na 5th na UK (THE 2016). Anyị bụ ndị a n'obi n'ezie ụwa na obodo na-adịgide ndụ, ọrụ, ma na-arụ ọnụ. Ị na-amụ ihe mba mkpa usoro ọmụmụ, na-ume-ebi ma na-amụ ná mba ndị ọzọ maka oge nke gị N'ezie, -aghọ akụkụ nke anyị iche iche obodo, na-ezi ọmụmụ ha onye research nwere zuru ụwa ọnụ mmetụta. Anyị na-enye gị ihe kasị mma ohere ka mpi a akụ na ụba ụwa.
Echiche nke otu na-enshrined ke nnyịn n'usoro ochichi na bụ isi ihe ị na-amụrụ ahụmahụ. Ka mba ndị ọzọ obodo ị na na na akụkụ nke n'iru, oge gị na Essex-enye enwe nnọọ ohere ime ka a dị iche na nke gị agụmakwụkwọ na-elekọta mmadụ ndụ, na ndị mejọrọ gị.
Time ná mba ọzọ na adịghị mmezi eri.
Employability na ọrụ nkwado, ọ bụghị naanị mgbe ị na-ebe a - ma maka ndụ
Na ị na-a so maka ndụ, na ndị niile metụtara uru na ohere.
Over 165 egwuregwu klọb na ọha mmadụ, otu n'ime ndị kasị elu club na-amụrụ oke na UK.
Pụrụ iche campus gburugburu na a di iche iche nke ihe ndị mere na ọrụ.
The Essex obodo jupụtara ohere izute ọhụrụ ndị, -agbalị ihe ọhụrụ na-esi na nkà ndị ọhụrụ. O nwere ike ghara ịdị mfe iso na-na-elekọta mmadụ ndụ anyị campuses. Si karaoke na su Bar ka n'ehihie, tii na Wivenhoe House (home anyị Edge Hotel School). Site n'inweta ihe a play na anyị Lakeside ma ọ bụ Clifftown ekiri fim na-bagging a kwe ọnụ ahịa na anyị ahịa ndị ọrụ ugbo - na nke ukwuu na-aga na ọ bụ gaghị ekwe omume-Ịnọ nkịtị gwụrụ.
ndu Sciences, School of
Computer Science na Electronic Engineering, School of
East 15 aghọ School
Health na Human Sciences, School of
Interdisciplinary Studies na Humanities, Center maka
Institute maka Social na Economic Research
Asụsụ na Linguistics, Department of
iwu, School of
Literature, film, na Ụlọ ihe nkiri Studies, Department of
Philosophy na Art History, School of:
Art History na Essex
Philosophy na Essex
Psychoanalytic Studies, Center maka
na July 1959, Essex County Council nabatara a amaghị si Alderman Leatherland na a mahadum-ike na-asị. A University Promotion Committee e kpụrụ onyeisi oche site Jehova Lieutenant of Essex, Sir John Ruggles-Brise, nke osụk a iwu ngwa ka University Grants Committee arịọ na a University of Essex ga-ike. Mbụ akụkọ tụrụ aro ka Promotion Committee tụrụ aro Hylands Park na Chelmsford dị ka saịtị maka ọhụrụ University, Otú ọ dị na May 1961, ntọala nke mahadum a mara ọkwa na Ụlọ Commons na Wivenhoe dị ka ihe ka mma na ọnọdụ na na December nke otu afọ, Wivenhoe Park e nwetara maka ọhụrụ mahadum. na July 1962, Albert Sloman, Gilmour Prọfesọ nke Spanish na Dean nke ngalaba nke Arts, University of Liverpool, a họpụtara ka Vice-chancelo na RT. ọ. R. A. Butler, a kpọrọ ịbụ chancelo, na Anthony Rowland-Jones họpụtara ka-edebanye aha.
The mbụ prọfesọ a họpụtara ndị na May 1963: Alan Gibson na Physics, Peter Townsend na Sociology, Donald Davie na Literature, Richard Lipsey na Economics, Ian Proudman na Mathematics, Jean Blondel na Government, na John Bradley na Chemistry. Na ya nke mbụ ya mkpara họpụtara, a development atụmatụ maka mahadum e bipụtara na a £ 1million ịrịọ Fund na oru. N'ime ọnwa isii ahụ ịrịọ Fund ama karịa ya £ 1million lekwasịrị na The Queen Nne na Sir Winston Churchillamong nkwado, mgbe a malitere ịrụ ọrụ ekpocha saịtị maka iwuli ọrụ. na mgbụsị akwụkwọ 1963, red a họọrọ dị ka University agba na mbụ prospectus dị njikere na-arụ ọrụ malitere na mbụ na-adịgide adịgide ụlọ; ndị sayensị ngọngọ na ji esi mmiri ọkụ ụlọ na-esote Wivenhoe House. na January 1964, Hardy Amies e mahadum agụmakwụkwọ uwe mwụda na-adịru nwa ozizi huts nwere na-wuru nso Wivenhoe House, mgbe ke March Sir John Ruggles-Brise họpụtara mbụ Pro-chancelo na Alderman Leatherland mbụ Treasurer nke University. Ọnwa abụọ gasịrị mahadum Armorial biarin e bipụtara, na motto “Chere ike, obi nkọ”.
na October 1964, nke mbụ 122 ụmụ akwụkwọ rutere na 28 akụziri mkpara na atọ n'ụlọ akwụkwọ: comparative Studies, Physical Sciences na Social Studies. Ngalaba nke Chemistry, physics, Government, sociology, Literature, Mathematics na Economics emeghe tinyere Language Center (mgbe e mesịrị Department of Language na Linguistics) na Computing Center (mgbe e mesịrị Department of Computer Science na Electronic Engineering) na Denis Mesure hoputara dị ka ndị mbụ President nke Mmụta’ Council. Ọrụ malitere na mbụ residential ụlọ elu, Rayleigh, na December na The Queen akwado ndị Onyinye nke Charter-mmetụta si 11 January 1965.
1965 me 399 ụmụ akwụkwọ idebanye aha maka mmalite nke ọhụrụ agụmakwụkwọ; ọnụ ọgụgụ nke agụmakwụkwọ mkpara karịa okpukpu abụọ na 61; na mbụ degrees, ise MSc na ise MA degrees e ọdịda. The Physics ụlọ meghere na isii mbụ ala nke Rayleigh ụlọ elu ndị dị njikere maka arụ, mgbe a malitere ịrụ ọrụ na Albert Sloman Library. Nwanyị mbụ lecturer a họpụtara: Dorothy E. Smith na Department of Sociology. na December, University Court zutere na nke mbụ oge na gburugburu 500 òtù. Mgbe ọnwa isii gasịrị, ọrụ malitere na Lecture Ụlọ ihe nkiri Building, gbakwunyere na 'egbupụsị si’ nke Keynes elu.
na October 1966, na hegzagon Restaurant na General Store meghere, na ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ na-eru 750. Jehova Butler e arụnyere ka chancelo na a ememe ẹkenịmde ke Colchester si moot Ụlọ Nzukọ 1967 na mbụ Asọpụrụ Ogo adade, na University nke Mace e rụrụ maka oge mbụ, mgbe mbụ kwa afọ Degree Ọgbakọ ikwo 135 ogo edunye na July. Mgbe mmalite nke ọzọ agụmakwụkwọ, Ngalaba nke Computer Science na Electronic Systems Engineering nabatara mbụ ha na ụmụ akwụkwọ, na SSRC Data Bank (mgbe e mesịrị renamed UK Data Archive) e guzobere na Lecture Ụlọ ihe nkiri Building na Library meghere tinyere mbụ frasi nke Social na Comparative Studies ewu, mgbe ọrụ wee na Tawney na William Morris residential ụlọ nche.
on 25 November 2004, Ya n'iru eze na Queen na Duke nke Edinburgh gara mahadum dị ka akụkụ nke ya 40 ncheta ememe (1964-2004). Ụfọdụ n'ime ndị fọdụrụ n'ezinụlọ na-agba ọsọ òtù nke mkpara a kpọrọ izute ha na ngosi gụnyere University mbụ amụrụ, John M. Dowden. Starting postgraduate research on fluid dynamics at the age of 23 na 1963, John later became a professor of mathematics and was the head of the University’s Mathematics Department from 2001–2005. He retired in September 2008.
The university is constantly expanding. The Network Centre building opened in May 2004 housing the Department of Electronic Systems Engineering and parts of the Department of Computer Science (who merged in 2007 to create Computer Science and Electronic Engineering). The University Quays, a student accommodation complex housing 770 ụmụ akwụkwọ, opened in September 2003. The Ivor Crewe Lecture Hall, na a 1,000 seat capacity, mepere 2006. In Southend the £26m Gateway Building opened in 2007, a former church been converted to the Clifftown Studios providing East 15 students with a theatre, studios and workshop spaces. University Square, a 560 bedroom development near to the Gateway building opened in September 2010. At Wivenhoe Park, the ‘Social Science Research Centre’ was completed in February 2007, housing the University’s Institute for Social and Economic Research and the UK Data Archive. A new building for the School of Health and Human Sciences was opened in 2008, as was the ‘Centre for Brain Science’ housing part of the Psychology department. na 2013, The Meadows, a new 540-bedroom student accommodation complex opened on the Colchester Campus, and The Forum, a new public and academic library and learning centre opened in Southend. na 2015 two major projects were completed on the Colchester campus: a new Student Centre and Library extension, and a new zero-carbon Business School building complete with trading floor with Bloomberg terminals.
Ị chọrọ atụle University of Essex ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: University of Essex ukara Facebook